Shiinaha Polyester dahaarka Aluminium isku darka Aluminium warshad iyo alaableyda | Zhongming
Aluminiumka isku-darka ah ee aluminium (ACP), oo ka samaysan walxaha isku-dhafan ee aluminium (ACM), waa xayndaabyo fidsan oo ka kooban laba lakab oo khafiif ah oo aluminium isku duuban oo isku duuban oo ku xidhan udub aan aluminium ahayn. ACP-yada waxaa badanaa loo isticmaalaa duubista bannaanka ama wejiga dhismooyinka, dahaadhka, iyo calaamadaha.
ACP waxaa badanaa loo isticmaalaa duubista ama naqshadeynta qaab dhismeedka bannaanka iyo gudaha, saqafyada beenta ah, calaamadaha, mashiinnada lagu daboolayo, dhismaha weelka, iwm. Codsiyada ACP kuma eka xirashada dhismaha dibedda, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo ka mid ah xoqidda sida qaybaha , saqafyada beenta ah, iwm. ACP sidoo kale waxaa si weyn loogu dhex adeegsadaa warshadaha calaamadaha iyadoo lagu beddelayo substrates ka culus oo ka qaalisan.
ACP waxaa loo isticmaalay miisaan fudud laakiin aad u adag dhismaha, gaar ahaan qaab dhismeedka ku-meel-gaadhka ah sida waababka ganacsiga iyo waxyaalaha ku meel gaadhka ah ee la midka ah. Dhawaan sidoo kale waxaa loo qaatay inay tahay shey taageero si loogu dhejiyo sawir gacmeedka farshaxanka, badanaa iyadoo lagu dhammeeyo acrylic iyadoo la adeegsanayo hababka sida Diasec ama farsamooyinka kale ee wejiga lagu dhejiyo. Qalabka ACP waxaa loo adeegsaday dhismayaal caan ah sida Spaceship Earth, VanDusen Botanical Garden, laanta Leipzig ee Maktabadda Qaranka Jarmalka.
Qaab-dhismeedyadani waxay si wanaagsan u adeegsadeen ACP iyada oo loo marayo qiimaheeda, adkeysigeeda, iyo wax-ku-oolnimadeeda. Dabacsanaanta, miisaankeedu hooseeyo, iyo sameynta iyo farsamaynta fudud waxay u oggolaaneysaa naqshad hal abuur leh koritaan adag iyo adkeysi. Halka maaddada asaasiga ahi ololi karto, isticmaalka waa in la tixgeliyaa. Xudunta ACP ee caadiga ah waa polyetylen (PE) ama polyurethane (PU). Qalabkani malaha astaamo dabka u adkaysta (FR) mooyee haddii si gaar ah loola dhaqmo oo sidaas darteed guud ahaan kuma haboona dhisme ahaan dhismeyaal; maamulo dhowr ah ayaa gebi ahaanba mamnuucay isticmaalkooda.  Arconic, oo ah milkiilaha astaanta Reynobond, ayaa ka digaysa iibsadaha mustaqbalka. Marka laga hadlayo xudunta, waxay sheegaysaa in masaafada guddiga ka hooseysa dhulka ay tahay go'aamiyaha "qalabkee ayaa ammaan ah in la isticmaalo". Buug-yarahan wuxuu ku leeyahay sawir dhisme ololkiisu ku jiro, oo leh "[a] s ugu dhakhsaha badan dhismuhu inuu ka sarreeyo jaranjarooyinka dab-demiska, waa in lagu qaadaa walax aan guban karin". Waxay muujineysaa in badeecada polyetylen-ka ee Reynobond ay ku dhowdahay 10 mitir; badeecada dabka celisa (c. 70% xudunta macdanta) halkaas ilaa laga gaarayo c. 30 mitir, joogga jaranjarada; iyo badeecada yurubiyanka A2 lagu qiimeeyo (c. 90% core mineral) wixii ka sareeya intaas. Buug-yarahan, Nabdoonaanta Dabka ee Dhismayaasha dhaadheer: Xalalkayaga Dabka, qeexidda wax soo saarka waxaa la siinayaa oo keliya labada badeecadood ee ugu dambeeya. 
Qalabka wax lagu xiro, gaar ahaan xudunta, ayaa lagu soo koobay inay yihiin qayb ka mid wax ku biirin kara dabkii Grenfell Tower 2017 ee London,  iyo sidoo kale dabka dabaqyada dhaadheer ee Melbourne, Australia; Faransiiska; Imaaraadka Carabta; Kuuriyada Koofureed; iyo Mareykanka.  Diirkadaha dabka lagu qiimeeyo, sida dhogorta macdanta ah (MW), ayaa beddel ah, laakiin inta badan way ka qaalisan yihiin badanaana ma aha shuruudo sharci.
Gogosha aluminiumku waxay ku dahaadhan kartaa polyvinylidene fluoride (PVDF), muruqyada fluoropolymer (FEVE), ama polyester paint. Aluminium ayaa lagu rinjiyeyn karaa nooc kasta oo midab ah, ACP-yada waxaa lagu soo saaraa noocyo kala duwan oo midab bir ah iyo mid aan bir ahayn iyo sidoo kale qaabab ku dayanaya waxyaabo kale, sida alwaax ama marmar. Xuddunta ayaa caadi ahaan ah polyetylen-ka cufan (PE), ama isku-darka cufnaanta hoose ee polyetylen iyo macdanta si loo soo bandhigo guryaha dab-demiska.
Ballaaran Caadi ah 1220mm, 1250mm, gaar ahaan 1500mm caadadii la aqbalay
Dhererka Panel 2440mm, 5000mm, 5800mm, caadi ahaan gudaha 5800mm.for caadadii weel 20ft aqbalay
Dhumucdiisuna waxay Panel 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm…
Daawaha Aluminium AA1100-AA5005… (Shahaadada Kale ee Loo Baahan Yahay)
Dhumucda Aluminium 0.05mm - 0.50mm
Daahan Dahaadhka PE
PE Muhiimka ah Dib-u-warshadaynta 'Core Core' / Dab-demiska 'PE Core' iyo "Core Core" oo aan la jebin karin
Midab Bir / Matt / Glossy / Nacreous / Nano / Spectrum / cadayan / Muraayad / Granite / Wooden
Waxyaabaha Muhiimka ah HDP LDP Dabka-caddayn
Gaarsiinta Laba toddobaad gudahood kadib helitaanka deebaajiga
MOQ 500 Sqm midabkiiba
Summad / OEM Alumetal / Customized
Shuruudaha Bixinta T / T, L / C araga, D / P araga, Western Union
Xirxirida FCL: Jumlad ahaan; LCL: Xidhmada sariirtaada alwaax; sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha
Aluminium Aluminium Saqafka Guddi
Aluminium Aluminium ah Guddi isku dhafan
Guddi Isku-dhafan oo Aluminium ah
Guddiyada Isku-darka Aluminium ee Dabka Ka-hortagga ah
Guddi Isku-darka Aluminium Qorraxeed
Iskuxidhka Birta Cuplock, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Kwikstage Qalabka Isboortiga, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock,